Iindaba ezi-5 zokufunda ngo-Agasti. Incinci yayo yonke into. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama
Nge-Agasti, inyanga yeholide ngokugqwesa. Ilanga, ubushushu, ulwandle, iholide, ukuphumla kunye nokuzonwabisa kuthatha iintsuku kwaye sinexesha elininzi (okanye hayi) lokufunda. Ngokunjalo, intengiso yokupapasha ibuthathaka kancinci kwaye iindaba azinakuphuma kumaxabiso entengiso yomntu wesithathu. Kodwa ukuba ikhona ukukhutshwa okunomdla kunye nakho konke ukuthanda. Ezi zi-5 zazo zabaphulaphuli ukusuka kwi-0 ukuya kwi-99 yeminyaka ubudala kunye neentlobo ezahlukeneyo zesini. Amagqabantshintshi: isihloko sesithandathu kuthotho lweMillenium kunye nebali elitsha elicetyiswe ngomnye wabathengisi abasandula ukuthenga, I-Idelfonso Falcones. Masibone.
1.1 Ingcuka uLolo, ingcuka encinci enothando kakhulu - uCatherine Proteaux
2.1 I-Antipode-Paloma González Rubio
3 Inoveli emnyama
3.1 Intombazana eyaphila kabini - uDavid Lagercranz
4 Inoveli yezembali
4.1 Umzobi wemiphefumlo - uIdelfonso Falcones
5.1 USandman, intliziyo yeenkwenkwezi-Miguelanxo Prado kunye noNeil Gaiman
Ingcuka uLolo, ingcuka encinci enothando kakhulu -Catherine Proteaux
Imiselwe uku abona bafundi bancinci isihloko esitsha siphuma kulo mfanekiso weFrance. Yeyakhe ingqokelela yeencwadi zebhodi kwi I-Lobito, Ingcuka ehlekisa kakhulu. Incwadi nganye iqulethe Amabali ali-12 eepaneli ezi-7 nganye kwaye ikhona Kukulungele ukuqala abantwana ekufundeni yokulandelelana kwemifanekiso.
Iimpawu -UPaloma González Rubio
Incwadana entsha yombhali waseMadrid, ophumelele Ibhaso leAlandar 2019 Uncwadi lolutsha olunikezwe liQela le-Edelvives.
Umlinganiswa ophambili ngu UNerea, Ngubani ekufuneka eye phila kwii-antipodes, igama awaqala ngalo ukuliva wayecinga ukuba yindawo yobugqi. Kodwa kuyacaca ukuba hayi, yindawo yokwenene leyo Kuza kufuneka ashiye yonke into awayeyazi Kude kube lelo xesha: ubomi bakhe, abahlobo bakhe, isikolo sakhe ... noJaime, laa mfana amthandayo.
Intombazana eyayiphila kabini -UDavid Lagercranz
Ekupheleni kuka-Agasti isihloko sesithandathu ukusuka kuthotho oludumileyo lwe IMillenium. Ukutyikitya kwakhona uDavid Lagercranz, othathe ubungqina kumdali waseSweden ongasekhoyo UStieg Larsson. Ngokomgaqo kulindeleke ukuba kukuvala kolu ngcelele, kodwa ngubani owaziyo ...
Siphinda sihlangane nabalinganiswa beklasikhi abasuka kule nkulungwane intsha kuhlobo lwamva: charismatic Hacker U-Lisbeth Salander kunye nentatheli uMikael Blomkvist. U-Lisbeth uzilungiselela umlo wokugqibela ngokuchasene nodadewabo uCamilla, ngokufanayo kuye ngokuchasene nayo yonke into. Kodwa ngoku ILisbeth Ugqiba kwelokuba athathe amanyathelo. Se ushiye iStockholm watshintsha inkangeleko yakhe kwaye angangomnye umphathi, ukuba akunjalo ngenxa yokuba unompu phantsi kwebhatyi, ngu Hacker Ngaphandle kothotho kunye nezikrakra kwezemidlalo kunye neetattoos njengobhaka wokusinda okungenakwenzeka. U-Blomkvist uphanda ngokusweleka kwesinxibi eyaziwa kuphela ukuba usweleke ebiza igama lika mphathiswa wezokhuseleko wase Sweden. Ukongeza, wagcina inombolo yefowuni yakhe epokothweni. UMikayeli buyela eLisbeth kwakhonakodwa akafuni kwazi malunga nexesha elidlulileyo.
Umzobi wemiphefumlo -I-Idelfonso Falcones
Umbhali ophumeleleyo kuloo cathedral yolwandle uvelisa inoveli entsha ngo-Agasti kwakhona isethwe eBarcelona, kodwa ngelo xesha onamhlanje ebutsheni benkulungwane yama-XNUMX. Kwaye kukho izinto eziqhelekileyo zesiqhelo somthengisi onokuqikelelwa: ibali lothando, ukuthanda ubugcisa, izidubedube zentlalo kunye nokuziphindezela.
Umlinganiswa ophambili ngu UDalmau Sala, unyana we-anarchist wabulawa. Yi umdwebi wentlungu e-Barcelona yeengxabano kunye nenguquko kwezentlalo ekwahlulahlula ubomi bakhe. Kwisandle esinye, usapho kunye noEmma, ungumfazi amthandayo abakhuseli bomzabalazo wabasebenzi. Kwelinye icala, unomsebenzi wakhe kwiworkshop ye-ceramic kaDon U-Manuel Bello, umcebisi wakhe kunye ne-bourgeois Conservative iinkolelo eziqinileyo zamaKatolika. Umbuzo uya kuba indlela yokuphila phakathi kwamazwe omabini.
USandman, intliziyo yenkwenkwezi -Miguelanxo Prado kunye noNeil Gaiman
El Agasti 6 ukukhutshwa kwesi sihloko sencwadi yokuhlekisa kucwangcisiwe okokuqala ukupapashwa ngokukodwa. Chaza ibali ngefomathi enkulu nge Iskripthi esenziwe nguBriton Neil Gaiman kunye nokongezwa okukhethekileyo Umdwebi wekhathuni uMiguelanxo Prado, ophumelele amabhaso awaziwayo anje ngeMbasa yeSizwe yamaComic, uMvuzo oMkhulu we-Barcelona International Comic Fair okanye Eisner.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iindaba ezi-5 zokufunda ngo-Agasti. Incinci yayo yonke into.